Betsaka amin'ny antsika kaonteradia vokatra misy patanty. Mba hisorohana ny plagiarism dia tsy nametraka atiny loatra tao amin'ny tranonkala izahay. Azonao atao ny mifandray amin'ireo mpiasan'ny varotrao mba handefasana anao amin'ny antsipiriany momba ny anay kaontera.
Mampiasa an'io izahay kaonterasensor hanomezana vahaolana vahaolana haingana sy tsotra ary mahomby amin'ny tranomboky, tranombakoka, toerana mahafinaritra, fivarotana rojo, fivarotana lehibe, ary toerana hafa any an-trano sy any ivelany. izanykaontera Azo ampiasaina amin'ny fifehezana mandeha ho azy ihany koa.
HPC015S kaontera dia kaontenera mpandeha mpandeha kely mifindrafindra, misy herinaratra, alefa amin'ny WIFI. Fitaovana iray ihany no afaka mahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa. Ny efijery dia mazava sy havaozina amin'ny fotoana tena izy. Tsy mila frais hafa. Azonao atao ny misafidy ny maody amin'ny tambajotra na maody irery.
Rehefa milina fanisana tongotra mampiasa ny maody tambajotra, ny kaonteramanome tambajotram-pifandraisana WIFI-AP sy serivisy WEB natsangana. Aorian'ny fampifandraisana sy fidirana an-tsokosoko amin'ny alàlan'ny telefaona finday (Android, IOS), ampiasao ny pejy WEB hametrahana ireo masontsivana amin'ny fantsom-pifamoivoizana manisa ny mpandeha na mizaha data, mamintina ary manome tatitra fanadihadiana isan-karazany ny mpizara, miantsona amin'ireo rafitry ny antoko fahatelo na fanitarana fiasa.
Ny sensor an'ny Footfall dia afaka mamonjy ny firaketana ny mpandeha araka ny fe-potoana voafaritra, ary mampakatra ny firaketana ny mpandeha amin'ny mpizara voatondro arakaraka ny fotoana voafaritra.
Kaontera amin'ny tongotra manome ihany koa ny fanohanana ara-teknika feno hanampy amin'ny fampandrosoana faharoa, antso ho an'ny interface API ary ny fampandrosoana faharoa, manome feno milina fanisana tongotraprotokolon'ny serasera sy ny fanohanana ara-teknika mifandraika amin'izany, ary ny fomba docking data marobe. Mampiasa mpizara matihanina ity sehatra ity mba hanomezana fampiharana malefaka sy ahazoana aina Experience, server backup backup tsy miankina mba hiantohana ny fahamendrehan'ny angona.
Loko Mainty na fotsy
fifandraisana Wireless, fanohanana modely Wifi
Ny sakan'ny detection 1-20 metatra
Bateria hatramin'ny 1.5 taona (bateria mahazatra iraisam-pirenena)
Fomba fizahana data Finday na PC
Fa maninona no misafidy kaonteran-tongotra MRB?
1. Araka ny fiovana amin'ny angon-drakitra mpandeha kajy izay kaontera, faritra manokana sy vanim-potoana manokana azo tsaraina, ary ny fitantanana ny fananana, ny fikojakojana ary ny filaminana dia azo alamina tsara mba hisorohana ny fatiantoka tsy ilaina amin'ny fananana.
2. Ny fivezivezena amin'ny mpandeha ao amin'ny faritra lehibe kajy ny footfall sensor manome fototra ara-tsiansa ho an'ny fampidirana tafiditra ao amin'ny faritra iray manontolo.
3. Amin'ny alàlan'ny statistika sy fampitahana ny fivezivezena amin'ny mpandeha amin'ny vanim-potoana samihafa, manombatombana amin'ny fomba ara-tsiantifika ny paikadin'ny asa fampiroboroboana ny varotra.
4. Amin'ny famakafakana ny angona ao amin'ny kaontera, farito tsara ny haavon'ny vidin'ny fanofana fivarotana fivarotana.
5. Araka ny isan'ny mpandeha tafahitsoka ao amin'ilay faritra dia azo ahitsy araka ny antonony ny harenan'olombelona hifehezana ny vidiny.
6. Manome fototra ara-tsiansa amin'ny fanatsarana ny teti-bolan'ny dokam-barotra sy ny fampiroboroboana amin'ny alàlan'ny antontan'isan'ny mpandeha.
7. Amin'ny alàlan'ny sensor sensor, ny herin'ny fandaniana antonony amin'ny fivezivezan'ny mpandeha dia azo isaina mba hanomezana referansa ny fametrahana ny vokatra.
8. Amin'ny alàlan'ny milina fanisana tongotra, ny ora fiasana dia azo apetraka araka ny antonony ary azo ahena ny fatiantoka.
Ahoana ny fiasan'ny counter counter?
Fitsipika fanisana: teknolojia fizarazarana, taratra infrared.
Fomba fampidinana data: fampidinana data amin'ny server cloud amin'ny alàlan'ny WIFI tsy misy tariby.
Fampisehoana angon-drakitra: fisehoana amin'ny efijery tena izy ny valin'ny lehibe OLED amin'ny angon-drakitra fidirana sy fivoahana androany.
Famantarana ny sakany: 1-20 metatra anaty trano, 1-16 metatra ivelan'ny trano.
Fomba fanisana: ny isan'ny fikorianan'ny mpandeha sy mivoaka azo isaina misaraka.
Fomba fijerena angona: ampidiro ny URL amin'ny telefaona finday na PC hiditra amin'ny pejin-tranonkala, miditra amin'ny anaran'ny kaonty sy teny miafina hijerena, ary azonao atao ny miditra amin'ny angon-drakitra fe-potoana samihafa hijerena.
Fomba fametrahana: amboary ny mpandefa infrared sy mpandray infrared amin'ny haavony mitovy amin'ny lafiny roa amin'ny fantsona, ialana ny sakana eo afovoany, ary ny haavon'ny fametrahana dia eo anelanelan'ny 1.2-1.4 metatra.
Fomba famatsiana herinaratra: famatsiana herinaratra USD, famatsiana herinaratra bateria lithium azo havaozina (azo ampiasaina mandritra ny 3 volana aorian'ny fiampangana azy).
Ny angona data an'ny magazay samy hafa dia azo zahana amin'ny kaonty iray ihany, tantanana miaraka amin'izay, ary azo atao ny mampitaha ny data.
Ny fifehezana ny fibodoana dia azonao apetraka amin'ny kaontera rindrambaiko.
Horonan-tsarimihetsika HPC015S Footfall
Manana karazana IR maro isika kaontera, 2D, 3D, AI kaontera, misy hatrany izay mety aminao, azafady mba mifandraisa aminay, hanoro ny mety indrindra izahay kaontera ho anao ao anatin'ny 24 ora.
Teo aloha: Masinina fanisana olombelona MRB USB ho an'ny HPC015U antsinjarany
Manaraka: Ny olona nomerika nomerika MRB dia mifanohitra amin'ny HPC005U